January 18, 2021 Xuseen 0
Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa ayaa shaaca ka qaaday inuu kulamo la qaadan doono xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres iyo 15-ka xubnood ee golaha ammaanka.
Waxa uu kulamada xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey iyo xubnaha golaha ammaanku ku sheegay sdii uu ugu soo bandhigi lahaa xaaladda xiligaan ka taagan gudaha Soomaaliya isla markaana uu ka dhageysan doono talooyinka ay usoo jeediyaan.
“Safarkeyga waa mid leh dhawr ujeeddo, tan koowaad waa in aan xoojiyaa xiriirka Soomaaliya & Mareykanka oo aan ka shaqeeyo qorshaha ballaarinta, maadaama madax cusub ay imaaneyso, waxa aan New York kula kulmayaa shanta xubnood ee rasmi ah & tobanka wareega, kadib waxa aan qaabilayaa Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay oo aan warbixinta Xaaladda Dalka la wadaagayo,” ayuu yiri Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud.
Wasiirka ayaa waxa uu sheegay inuu la kulmay qaar ka mid ah safiirada wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya, waxeyna ka wada hadleen xaaladda uu dalka ku jiro iyo isbadalka sanadka cusub.
Dowladda Soomaaliya waxey wali radaineysaa lacag dhan 36 Malyan oo Doolar oo ay ka doonayeen qaramada Midoobay si ay doorasho u qabtaan, waxeyna sheegeen in doorashada ay ku baxeyso lacag dhan 40 Malyan oo Doolar.